ဝတ်ပြုဆုတောင်းဖို့သွားကြတဲ့ ရွာသားများ အာဏာပိုင်က တားဆီး စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းကြောင့် လက်ပံတောင်းတောင် ပျောက်ကွယ် မသွားရအောင် မုံရွာမြို့ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကို ဒီကနေ့ ၀တ်ပြု ဆုတောင်းဖို့ သွားရောက်ကြတဲ့ ၀က်မှေးရွာနဲ့ ရွှေလှေရွာက ရွာသား ၁၀၀ ကျော်ကို လမ်းတစ်ဝက် အရောက်မှာ အာဏာပိုင်တွေက မြစ်တဖက်ကို ဖြတ်ကူးခွင့်မပြုဘဲ တားဆီး ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဆန္ဒပြပွဲ၌ မီးသတ်ကား ၃ စီး၊ လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅၀ က စောင့်ကြည့်နေစဉ်။
ခရိုင်ရဲအရာရှိရဲ့ အမိန့်နဲ့ ပိတ်ပင်လိုက်တာ ဖြစ်ပြီး အခုလို ဘုရားမှာ ၀တ်ပြုဆုတောင်းမယ့် သူတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်တဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒီဝတ်ပြု ဆုတောင်းပွဲကို ဦးဆောင်တဲ့ ရွာသားတစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
၀က်မှေးရွာနဲ့ ရွှေလှေရွာက ရွာသားတွေဟာ မနက် (၉) နာရီလောက်က ရွာက စထွက်ပြီး ညောင်ပင်ကြီး ဆိပ်ကမ်း အရောက်မှာ တားဆီး ခံရတာဖြစ်ပြီး ရွာသားတွေအနေနဲ့ ညနေပိုင်းအထိ ရွာကိုမပြန်ကြဘဲ အဲဒီမြစ်ဆိပ်ကနေ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားရှိတဲ့ မြစ်တဖက်ကမ်းကို ဖြတ်ကူးခွင့် မပြုမချင်း ထိုင်စောင့်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဝက်မှေးနှင့်ရွှေလှေ ကျေးရွာသူ ၉ ဦး ပြန်လွှတ်ပေး မုံရွာမြို့ဘုရားဖူး အမျိုးသမီး ၁၂ ဦး အာဏာပိုင်ဖမ်းဆီး မကွေးဒေသခံတွေကို အာဏာပိုင်က စစ်ဆေးမေးမြန်း
ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက် ကြေးနီစီမံကိန်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဟောပြော
အသုံးအနှုန်း မှားယွင်းနေပါသည်။ လေ့လာပြီးမှ တင်ပြသင့်ပါသည်။ သတင်းကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြရန် အရေးကြီးသော်လည်း ဘာသာချင်း အငြင်းပွားမှု့များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့် အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။
Sep 19, 2012 03:30 AM
ဒီပုလိပ်တွေဟာ ပြည်သူတွေကျွေးတဲ. အစာကိုစားပြီး ပြည်သူ.လက်ကိုတော.ပြန်မကိုက်သင်.ပါဘူး ပြည်သူ.အကျိုးကို မကြည်.တဲ.အကောင်တွေကို ရဲလို.မခေါ်ထိုက်ပါဘူး ပုလိပ်စိတ်ဓါတ်က ဘယ်တော.မှ ပျောက်မှာမဟုတ်ဘူး
၀တ်ပြုဆုတောင်းလို.မသုံးသင့်ပါဘူး ဆုတောင်းမေတ္တာပို.သတယ်လို.သုံးသင့်ပါတယ် စာရေးအသားမှားနေပါတယ် ကျွန်တော်တို.က ဗုဒဓဘာတွေပါ
''၀တ်ပြုဆုတောင်း''ဟုမသုံးနှုန်းသင့်ပါ။ ဗုဒဓဘာသာတွင် ''ဆုတောင်းမေတာပို''့သည်သာရှိပါတယ်။
Sep 10, 2012 06:34 AM
So what does the super-expensive clown "Pyi Thu Lwaut Taw" do?
Sep 10, 2012 06:19 AM